Florent Malouda oo Janaayo lala xiriirinaayo inuu u dhaqaaqo kooxda Santos ee dalka Brazil. - Caasimada Online
Home Warar Florent Malouda oo Janaayo lala xiriirinaayo inuu u dhaqaaqo kooxda Santos ee...
Florent Malouda oo Janaayo lala xiriirinaayo inuu u dhaqaaqo kooxda Santos ee dalka Brazil.
Ciyaaryahanka kooxda Chelsea Florent Malouda ayaa bisha Janaayo diirada u saaran kooxda ka dhisan dalka Brazil ee Santos, sida uu qoray wargeyska Daily Mirror.
32 jirkaan garabka ka ciyaara ayaa waayadaan dambe laga deyrinaayey mustaqbalkiisa Stamford Bridge, ka dib markii loo sheegay inuu tababarka la qaato kooxda Juunyarka ah ee Chelsea, wuxuuna laf ahaantiisu isku howlay sidii uu ku heli lahaa koox cusub.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France ayaa soo jiitay Vasco Da Gama iyo kooxdiisii hore Lyon laakiin wuxuu door bidi karaa inuu u dhaqaaqo Koonfur Ameerica iyadoo gabadha u dhaxda ay kasoo jeedo dalka Brazil.
Madaxweynaha kooxda Santos Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro ayaa rumeysan inay Chelsea kala soo wareegi karaa xidigaan loona ogolaan doono inay qaataan bisha Janaayo.
Laakiin halka dhibaatadu ka imaan doonto waa mushaarkiisa oo isbuuclaha ah ee 80 kun oo ginni ah, hadii ayna kooxda reer Brtazil bixin karto, Chelsea ayaan biyo u kaban doonin inay ka iibiso xidiga.
Malouda , xiriir wanaagsan kalama dhexeeyo kooxdiisa Chelsea ka dib markii uu aalada bulshada ee Twitter-ka ku baahiyey sawirada isagoo tababar la qaadanaayo uunyarka Blues. Waxayna u muuqataa inuu daneynaayo inuu ka tago Galbeedka London.